Thanda uChanthaburi kwiFirefly Island.
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguLove
Ukuhlala ngaphandle kwegridi: Ifumaneka kwiSiqithi sabucala ngakumlambo iChanthaburi. Ukuqubha, ukukhwela isikhephe kwaye ufumane amava ngokutya kwaseThai kwasekhaya kwisidlo sangokuhlwa kunye nesidlo sakusasa okanye nje i-chillax
Chitha ixesha kunye nathi njengomntu womthonyama kwiSiqithi sabucala apho sikufutshane nendalo. Ukuhlala ngaphandle kwegridi yindawo entle yokuphumla okanye yokukhupha iplagi ekukuphela kwemizuzu eli-15 ukusuka edolophini. Ukuhamba ngesikhephe, ukubukela kunye nokumamela iintlobo ezahlukeneyo zeentaka eziculayo, indawo entle yokubona ukuphuma nokutshona kwelanga. Ukukhenketha ngokujonga indawo.
Kufuphi neSixeko saseChanthaburi esidume ngobuninzi beziqhamo zasetropiki kunye neziko lokuthengisa amatye anqabileyo. Iphondo lasempuma leChanthaburi likwasikelelwe ngamahlathi atyebileyo, aluhlaza kunye neengxangxasi ezintle. Umlambo iChanthaburi uqukuqela kwikomkhulu lephondo, elihlala abantu ukusukela kumaxesha amandulo. Iitempile ezininzi zamaBhuda kunye neelwandle ezinoxolo azikho kude edolophini, nto leyo eyenza ukuba iChanthaburi ibe lelona phondo lokusuka kulo lonke elaseThailand.
Umbuki zindwendwe ngu- Love
24 iiyure uncedo. Nceda uzive ukhululekile ukusicela nantoni na.